टिकटकमा हिट भएपछि मानहुँकोट एकाएक चर्चामा, बाटोभरि जाम ! - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
टिकटकमा हिट भएपछि मानहुँकोट एकाएक चर्चामा, बाटोभरि जाम !
तनहुँको व्यास नगरपालिका-५ मा रहेको मानहुँकोट डाँडा हिजोआज निकै चर्चित छ । यहाँ दिनहुँ मानिसहरुको भिड लाग्न थालेको छ । केही समयअघिसम्म उपेक्षित मानहुँकोटमा हिजोआज दिनमै एक हजारभन्दा धेरै मानिस घुम्न पुग्छन् । बस्ती नै रित्तिसकेको यो डाँडोमा अहिले मान्छेको चापलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको बताउँछन् व्यास नगरपालिकाका मेयर वैकुण्ठ न्यौपाने बताउँछन् ।
‘सामाजिक सञ्जालमार्फल भाइरल भएपछि युवाहरु आएका छन् । बस्ने ठाउँ नपाएर, मान्छेहरु होटल पनि नपाएर चोक र गल्लीमा छन्,’ मेयर न्यौपानेले भने, ‘हामी पनि चकित छौं । आज मिटिङ त्यहीँ राखेका छौं ।’